तपाईं जंगल को राजा हो जस्तै तपाईं महसुस प्ले एक स्लट खेल कहिल्यै बनाएको छ? खैर, यी स्लट के तपाईं बेलायत खेल जित्न तपाईं अनुभव को ठीक कि प्रकारको दिन्छ राख्न. जंगल आत्मा: जंगली को कल कुनै मजाक तर तपाईं जीत गर्न सक्ने प्रशस्त सम्पत्तिहरू एक वन छ. पृष्ठभूमिमा एउटा निर्मल तर गहिरो र अँध्यारो जंगल संग, यो खेल एक साहसिक को एक बिल्ली भन्दा कम केही छ. त्यहाँ roars र उतेजना तपाईंलाई मा हडताली राख्न भनेर जङ्गली जनावर आफ्नो खेल अनुभव रोमाञ्चकारी एक बनाउँछ छन्. fireflies एक गुच्छा बिल्कुल जादुई देखिन्छ कि स्क्रीन भर उडान राख्छ.
जंगल आत्मा को विकासकर्ताको बारेमा: जंगली को कल :
विकासकर्ता मनोरम विषयवस्तुहरू र मन-उड्ने ग्राफिक्स आफ्नो मन लोभ्याउन संग स्लट खेल बनाउनको लागि लोकप्रिय छ जो NetEnt छ. तिनीहरूले सबै भन्दा राम्रो स्लट केही तपाईं अनलाइन आनन्द उठाउन सक्छौं कि बेलायत खेल के जीत र धनी बनाउन सक्छ केही विशाल पुरस्कार जित्न राख्न छन्.
एक बाक्लो जंगल को बीचमा को पृष्ठभूमि सेट, तपाईं स्लट भनेर आकर्षित राख्न केही अचम्मको प्रतीक संग रोलिङ देख्न सक्नुहुन्छ. यो स्लट मा पाँच उच्च मूल्य प्रतीक हो के तपाईं बेलायत खेल जित्न राख्न; बाघ, गोही, कोब्राको, सहन र हात्ती बाट कार्ड खेल्दै साथ 10 एक गर्न. बाघ उच्चतम कि पुरस्कार तपाईं एक payline तिनीहरूलाई पाँच सबै को मूल्यवान छ 150 पटक आफ्नो खम्बा. यो खेल प्रस्ताव 1024 यस्तो प्रतीक विस्तार रूपमा अचम्मको बोनस सुविधाहरू जीत तरिकाहरू, पुतली बढावा र स्क्याटर.
प्रतीक विस्तार: नाम स्क्याटर बाहेक सबै खेल प्रतीक सुझाव रूपमा यसको सम्बन्धित रील विस्तार प्राप्त. जब यो एक चमकिलो पुतली संग कुनै पनि प्रतीक कुनै पनि विजेता संयोजन संग देखिन्छ यो हुन्छ. यो पुतली ओभरले प्रतीक त आफ्नो winnings बडा र राम्रो बनाउन आफ्नो सम्पूर्ण रील गर्न विस्तार. यहाँ संभावना त्यहाँ विस्तार र कहिले पाँच यस्तो बाघ प्रतीक विस्तार सबै सँगै गर्न सक्ने एक भन्दा बढी प्रतीक हुन सक्छ छ, तिमीले जित्यौ 1024 पटक आफ्नो खम्बा.
स्क्याटर: यो स्लट तपाईं बेलायत के जीत राख्न मा स्क्याटर प्रतीक एक लोटस फूल र तीन वा बढी यी सक्छन् पुरस्कार तपाईं निःशुल्क spins को प्रतिनिधित्व छ. यदि तपाईं प्राप्त4वा5त्यसपछि तपाईं जीत सके spins 15 वा 50 पटक निःशुल्क spins बाहेक आफ्नो खम्बा. निःशुल्क spins संख्या लागि, तपाईं वास्तवमा भन्ने आफैलाई चयन गर्न र तिमी चयन गर्न सक्नुहुन्छ 4, 8, 12, 16 वा 20 spins. spins एक कम नम्बर तपाईं उच्च मूल्य WINS हुन्छ, जबकि 20 spins मात्र तपाईं दिनेछु सानो रकम जित्छ.
सारांश: यी स्लट के तपाईं बेलायत खेल जित्न पैसा तपाईं पाउण्ड हजारौं जित्न सक्छौं कि मेगा र सुपर मेगा WINS लागि अवसर को उच्चतम नम्बर प्रदान गर्दछ राख्न. यो खेल मा न्यूनतम शर्त 20p छ र प्रति स्पिन £ 100 को अधिकतम.